Hlola i-Amsterdam, Netherlands - World Tourism Portal
Hlola i-Amsterdam, eNetherlands
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Amsterdam, Netherlands.
Izindawo ongazivakashela eduze kwe-Amsterdam
Amawebhusayithi okuvakasha asemthethweni e-Amsterdam, Netherlands
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Amsterdam, eNetherlands
Hlola i-Amsterdam inhlokodolobha ye abase Netherlands. Njengoba inezakhamizi ezingaphezu kwesigidi endaweni yayo yasemadolobheni (futhi icishe ibe yizigidi ezimbili nengxenye endaweni yayo yedolobha), iyidolobha elikhulu kunawo wonke ezweni futhi isikhungo sayo sezezimali, amasiko, nokudala sifuna ukuthi uhlole i-Amsterdam.
I-Amsterdam ingenye yezindawo ezidume kakhulu eYurophu, eheha abagibeli bamazwe omhlaba abangaphezu kwezigidi ezingama-7 minyaka yonke.
I-Amsterdam yaziwa kakhulu ngokuthi Venice yaseNyakatho ngenxa yemisele yayo ethandekayo ewela idolobha, izakhiwo zayo ezihlaba umxhwele kanye namabhuloho angaphezu kwe-1,500. Kukhona okuthile ukunambitheka komhambi ngamunye lapha; noma ngabe uthanda isiko nomlando, ukwahlukanisa ngokungathi sína, noma nje ukujabulisa okuphumuzayo komuzi wakudala waseYurophu.
Isikhungo esidala. Isikhungo sangezikhathi zasendulo nendawo evakashelwa kakhulu e-Amsterdam. Kuyaziwa ngokwakhiwa kwayo kwendabuko, imisele, ukuthenga kanye nezitolo eziningi zekhofi. IDamu Square lithathwa njengesikhungo salo esikhulu, kodwa njengoba zithakazelisa nje yindawo ezungeze iNieuwmarkt neSpui. Isifunda iRed Light siyingxenye yeCentrum.
Indandatho Yendandatho. Isiza samagugu omhlaba se-UNESCO, iCanal Ring yambiwa ngekhulu le-17th ukuheha abaninikhaya abanothileyo. Kusengumakhelwane we-posh onosaziwayo abaningi abangamaDashi abanempahla. ILeidseplein neRembrandtplein yizindawo eziphambili zedolobha ezihamba phambili ebusuku.
Indawo yendabuko yabasebenzi bendabuko iye endaweni ephezulu enezindawo eziningi zemidwebo yobuciko, izindawo zokudlela zama-hip nezindawo zokudlela ezenzekayo. Kubandakanya ne-Haarlemmerbuurt kanye ne-Western Islands.
Isifunda sekhulu le-19th se-century elineminyuziyamu eminingi. Ngaphandle nje kweWaterlooplein uzothola uMnyuziyamu wamaJuda, i-Hermitage Amsterdam nezingadi ze-botanic. Konke ukuhamba ibanga ukusuka ku-Artis Zoo, iTropenmuseum (Museum of the Tropics) neScheepvaartmuseum ebabazekayo.
Enye yezindawo eziyinhloko zase-Amsterdam, uhambo oluya edolobheni alupheli ngaphandle kokuvakashela iMyuziyam Quarter. Ungashisa iVondelpark ngebhodlela lewayini, noma uye ekuzingeleni okuthengiswayo emakethe ye-Albert Cuyp. Yindawo ethandwa kakhulu indawo yokuhlala njengoba amanani eshibhile kakhulu kunaphakathi enkabeni yedolobha.
Indawo enkulu yasemadolobheni engahlukaniswa e-Old naseNew West. I-Old West indawo ebukekayo eyakhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-19th. INew West yakhiwa ngemuva kweMpi Yezwe II futhi imvamisa ibamba izihloko zamaphephandaba ngobugebengu; ukuvuselelwa kwamadolobha kuyaqhubeka nokwenza ngcono izimo zokuhlala kule ndawo.
INyakatho ikakhulukazi iyindawo engaphansi yokuhlala ehlangothini olusenyakatho lwe-IJ, enesizinda sokuthuthuka esisheshayo somsebenzi wamasiko eceleni komfula. Izivakashi eziningi zikhangwa endaweni esempumalanga yomgwaqo u-A10, okuyindawo evikelekile yemvelo engokwesifunda saseMantiland kanye neZaan. Le ndawo esemaphandleni yamaDashi ihlolwa kangcono ngebhayisekili.
IMpumalanga yindawo yokuhlala ehlukahlukene futhi ehlukahlukene. I-Eastern Docklands ne-IJburg zivelele njengezindawo ezicebile ezaziwa ngokwakhiwa kwazo kwesimanje.
Isembatho se-Amsterdam, iSoutheast yabonwa kusengaphambili njengendawo yangomuso enamakamelo amakhulu amafulethi ahlukaniswe ngamapheshana aluhlaza. Saphenduka ikhaya lesifunda esisezingeni eliphansi kubantu bezizwe ezingaphezu kwe-150, ngokuvamile elihlotshaniswa nobugebengu nokuphanga. Amarekhodi abo okuphepha athuthuke kakhulu eminyakeni edlule, kepha avakashelwa kakhulu ngabahambi abanamandla (nabathandi bebhola).
Indawo engaphansi eluhlaza e-Amsterdam (futhi ngobuchwepheshe obungeyona i-Amsterdam), iyikhaya lamakilabhu ezemidlalo amaningi e-'Amsterdam ', inxanxathela enkulu yezitolo kanye ne-Amsterdamse Bos (ipaki eliseningizimu ye-Amsterdam, empumalanga ye-Amstelveen). I-Tramline 5 ne-metroline 51 baya e-Amstelveen. (Akugqanyisiwe emephini.)
Ihleliwe njengedolobhana elincane lokudoba ngasekupheleni kwekhulu le-12th, i-Amsterdam yaba ngesinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu zokuhweba emhlabeni ngesikhathi seDutch Golden Age yekhulu le-17th, ngokushintshana kokuqala kwesitoko kanye nokuqhutshwa okuhlangene okuzala usuku lwanamuhla lwe-Capitalism . Isikhungo esincane sedolobha sakudala sakhula ngokushesha njengoba kwakhiwa izindawo ezingomakhelwane beJordaan kanye neCanal Belt; ukubaluleka kwamasiko kwamukelwa lapho kuba yiSiza Samagugu Omhlaba se-UNESCO e2010. Eminyakeni eyi-19th ne-20th, idolobha landa kuzo zonke izindlela, linomakhelwane abaningi abasha nezindawo ezingaphansi ezakhiwe ngezitayela zesimanje.
Abantu abaningi bakhetha ukuvakashela i-Amsterdam ngenxa yedumela layo lokubekezelela, yize ingxenye yaleli gama ibangelwa ukungaboni ngaso linye ngokwesiko. Ubufebe busemthethweni futhi bunamalayisense kuyo abase Netherlands, nase-Amsterdam kuyabonakala kakhulu (ubufebe bewindi), futhi kunezinombolo ezinkulu zezifebe. Ukuthengiswa, ukutholakala, kanye nokusetshenziswa kwenani elincane le-cannabis, ngenkathi kungekho emthethweni, kuvunyelwe ngabaphathi (inqubomgomo ye-gedogen). Lokhu akusho ukuthi ungahambisana nanoma yini e-Amsterdam. Kunoma ikuphi, izimo zengqondo zomphakathi nenqubomgomo esemthethweni ziye zaqina eminyakeni yamuva.
Ngokuya ngokubuka kwakho abanye abantu bazobheka i-Amsterdam njengedolobha elingalungile kanti abanye abantu bazothola izimo zabo ezivuselelekayo ziqabula. Uma ugwema isifunda sokukhanya okubomvu, i-Amsterdam indawo enhle yomndeni.
I-Amsterdam idolobha elikhulu nendawo enkulu yabavakashi, ngakho ungayihambela unyaka wonke. Kodwa-ke, ebusika izinsuku zimfushane (amahora we-8 amahora asemini azungeze uKhisimusi), futhi isimo sezulu singase sibe sibanda kakhulu ukuba ungahamba uzungeze idolobha ngokunethezeka, ungayeki umjikelezo.
I-Amsterdam Airport Schiphol 15km eningizimu-ntshonalanga yedolobha. Ihlala ezikhumulweni zezindiza eziphezulu ze-15 emhlabeni wonke ngenxa yokuhamba kwabagibeli, isebenzisa abagibeli abangaphezu kwezigidi ezingama-60 ngonyaka.
Indlela emnandi yokumboza inhlabathi eningi ukuqasha ibhayisekili. Idolobha linobungani kakhulu ngebhayisekili, futhi kunemigwaqo ehlukile yebhayisekili emigwaqweni emikhulu. Enkabeni yedolobha, noma kunjalo, ngokuvamile akukho sikhala esanele somgwaqo webhayisekili, ngakho izimoto nabahamba ngamabhayisekili bahlanganyela emigwaqweni emincane.
Yini mahhala e-Amsterdam, Netherlands.
Usuku e-Amsterdam ngaphandle kokuchitha penny: ukuhamba emiseleni, bheka iBegijnhof, iphunga izimbali eBloemmarket, vakashela imakethe yase-Albert Cuypstraat, bheka iMria Brug futhi uphumule eVondelpark.
I-Amsterdam iyindawo yesiko unyaka nonyaka imikhosi e-Amsterdam nawo wonke amaphakethe.
I-Amsterdam inezinhlobonhlobo zezingqayizivele zangemuva zesiko eziheha abathwebuli bezithombe, kusukela ekwakhiweni kwayo okuyingqayizivele kuya ezigcawini zasemgwaqweni zasemadolobheni nemisele emnandi.
I-Amsterdam inezinkundla zemidlalo emangazayo ukuheha nokujabulisa izivakashi ezivela emhlabeni wonke.
Imigwaqo ephakathi nendawo yokuthenga ihamba ngomugqa osuka ngaseCentral Station iye eLeidseplein: INieuwendijk, Kalverstraat, Heiligeweg, Leidsestraat. Ukugcizelelwa kusezingubo / imfashini, kepha ziningi ezinye izitolo. Akuyona imigwaqo yezitolo ephakeme, futhi isiphetho esenyakatho yeNieuwendijk sinesithombo. Umgwaqo okuyiwona kuphela osezingeni eliphakeme i-Amsterdam yi-PC Hooftstraat (eduzane neRijksmuseum).
Okunye ukugxila kwezitolo ezikulesi sikhungo yiHaarlemmerstraat / Haarlemmerdijk, Utrechtsestraat, Spiegelstraat (ubuciko / indawo yakudala), naseNieuwmarkt. Kunenqwaba yezitolo zamaShayina eZeedijk / Nieuwmarkt, kepha akuyona iCinatown yangempela.
Izitolo ezincane ezithokozisayo zitholakala emigwaqweni eseceleni kwemisele enkulu (i-Prinsengracht / Keizergracht / Herengracht), futhi ikakhulukazi eJordaan - iboshwe yiPrinsengracht, i-Elandsgracht, neMarnixstraat neBrouwinggracht. Indawo eyakheke kahle kaDe Pijp - ngaseFerdinand Bolstraat naseSarphatipark - ivame ukubonwa njengeJordaan yesibili.
Imfashini noMnyuziyamu Wesifunda. Itholakala e-Amsterdam Zuid, lokhu kubhekwa njengendawo eyi-chic yezitolo e-Amsterdam, eduze kwesifunda seMnyuziyamu, i-PC Hooftstraat kanye neCornelis Schuytstraat banezitolo ezithile ezinhle kakhulu zokuklama idolobha, kufaka phakathi nezicathulo zomklami, ezempilo nezazi ezisebenza kahle , i-massage, i-boutiques yemfashini, izinto zokuhlobisa umklami, izazi zezimbali kanye nezitolo zochwepheshe.
Ezindaweni ezindala ezizungeze lesi sikhungo, imigwaqo emikhulu yezitolo yiKinkerstraat, iFerdinand Bolstraat, iVan Woustraat neJavastraat. Umgwaqo wokuthenga omningi kakhulu e-Amsterdam yiJavastraat. Kukhona izitolo zamathoyizi nezitolo zezingubo zezingane esikhungweni, kepha iningi lisemigwaqweni yezitolo, ngoba yilapho imindeni enezingane ihlala khona.
Ungathola isayizi yezingubo zokugqoka enkabeni ye-Amsterdam.
Izincwadi zolimi lwesiNgisi zitholakala kakhulu e-Old Center. Izitolo ezinkulu ezinkulu zamaDashi nazo ziphethe Ukukhetha kwezincwadi zolimi lwakwamanye amazwe.
Izitolo eziningi ezihlose izivakashi zithengisa uhlobo oluthile lwesigqoko soboya obudicilelwe “AMSTERDAM” kuso. Abantu bendawo babheka le ndatshana ngokuthi “isigqoko sezivakashi” futhi ukugqoka kwakho kuzokumaka njengomvakashi, ngoba akekho umuntu ongumDashi owake wagqoka. Thenga eyodwa uma uyayithanda, kepha qaphela lokhu uma ufuna ukumane ungene ngaphakathi.
Izimakethe zemigwaqo ekuqaleni zithengise ukudla, kanti iningi lisathengisa ukudla nezingubo, kepha sekukhethekile.
U-Albert Cuyp. Elikhulu kakhulu e-Amsterdam, imakethe yasemgwaqweni eyaziwa kakhulu ezweni. Ungaxakwa kakhulu, ngakho-ke qaphela amakhethini. NgoMsombuluko kuze kube uMgqibelo kusukela cishe nge-9AM kuze kube nge-5PM.
I-Katemarkt eyishumi. I-3rd ngobukhulu e-Amsterdam. NgoMsombuluko kuze kube uMgqibelo kusukela cishe nge-8AM kuze kube nge-5PM. Ukudla, amakhaya, izimbali nezingubo.
Dappermarkt. Empumalanga, ngemuva kwe-zoo, futhi kwabavotelwa kakhulu emakethe eNetherlands. NgoMsombuluko kuze kube uMgqibelo kusukela cishe nge-8AM kuze kube nge-5PM.
ILindengracht. EJordaan, kuthengiswa izinhlobonhlobo zezimpahla, izithelo nemifino, inhlanzi kanye nezinto ezahlukahlukene zasendlini. NgoMgqibelo kuphela. I-9AM ukuya kwi-4PM. I-Tram 3 noma i-10 iya eMarnixplein, nokuhamba ibangana ngeLijnbaansgracht.
I-Lapjesmarkt. I-Westerstraat, eJordaan. Imakethe ekhethekile egxile ekuthengiseni izindwangu nezinto zokwakha izingubo, amakhethini njll NgoMsombuluko kuphela. I-9AM ukuya kwi-1PM. I-Tram 3 noma i-10 iya kuMarnixplein.
Noordermarkt. Endaweni engokomlando yaseJordaan yedolobha. NgoMsombuluko ekuseni (i-9AM ukuya kwi-1PM) iNoordermarkt iyimakethe yezimpahla ethengisa izindwangu, amarekhodi, izembatho zezandla nokunye, futhi iyingxenye yeLapjesmarkt okukhulunywe ngayo ngenhla. NgoMgqibelo (9AM to 4PM), i-Noordermarkt iyimakethe yokudla yemvelo, ithengisa imikhiqizo eminingi yemvelo enjengezithelo nemifino ye-organic, amakhambi, ushizi, amakhowe njll, kukhona nemakethe encane yezikebhe.
Ukubhema kuvinjelwe kuyo yonke imigoqo nezindawo zokudlela zamaDashi, yize imigoqo eminingi namakhekhe kuye kwabopha amakamelo okubhema lapho kuvunyelwe khona ukubhema.
Ukuthi udlani futhi uphuze e-Amsterdam
I-Amsterdam yaziwa ngenqubomgomo yayo yenkululeko yezidakamizwa. Ama-coffeshops, hhayi ukuthi adidaniswe nezindawo zokudlela zekhofi noma ikhefi, avunyelwe ukuthengisa i-cannabis ne-hash yokusetshenziswa komuntu siqu (hhayi ngaphezu kwamagremu we-5). Ngenkathi ezobuchwepheshe zisasebenza ngokungemthetho, ikakhulukazi ukuthobela izivumelwano zomhlaba wonke, ukusetshenziswa komuntu siqu kwezidakamizwa (ezithambile) kulawulwa nguMnyango Wezobulungiswa ngaphansi kwenqubomgomo esemthethweni ye-gedogen; empeleni lokhu kusho ukwamukela noma ukubekezelela, ngokomthetho kuyimfundiso yokungashushisi ngesisekelo sokuthi isenzo esithathiwe singekho emthethweni kakhulu ukuze senze ukushushiswa kokukhetha. Ama-coffeshops athengisa izidakamizwa ezithambile kuphela (ezinjenge-cannabis), ukuthengisa ezinye izidakamizwa akuvunyelwe. Ukuthengisa amakhowe ama-hallucinogenic omisiwe akuvunyelwe.
Lokho kusho, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuya ngokuya kulawulwa ngokuqinile nguhulumeni waseDashi. Ukukhangisa kwe-Garish akuvunyelwe (funa imibala ebomvu ye-rasta ebomvu-eluhlaza kanye negama lesiNgisi elithi "coffeshop"); akukho buthi noma imikhiqizo edliwayo ye-cannabis engathengiswa ngaphakathi kwekhofi; amakhasimende afuna ukubhema ukhula lwawo oluhlanganiswa nogwayi alinganiselwe ezindaweni 'ezikhethekile zokubhema'; inani lama-coffeshops lehlile kakhulu kusukela nge-1995; ama-coffeshops ngaphakathi kwe-'250 imitha yesikole 'asevaliwe; futhi ukusetshenziswa kwamakhowe omlingo kunqatshelwe kusukela ngoDisemba 2008 (ngemuva kwezigameko ezimbili zokubulawa kwabavakashi bakwamanye amazwe).
Namanje kukhona cishe amakhofi ama-250 e-Amsterdam, iningi lawo ase-Old Center. Ama-coffeshops amaningi ajabule ukuncoma izinhlobo futhi akulungiselele ukuhlanganyela kwakho. Abanye banikela ngama-vaporizer / inhalators kubantu abangafuni ukubhema.
Ukusebenzisa (ezithambile) izidakamizwa akuvunyelwe ezindaweni zomphakathi, noma empeleni ngeke kube yinkinga. Vele uhlale kude nezindawo zokudlala zezingane nezikole. Amakhofi amaningi anikeza 'indawo yokuphumula yokubhema' lapho izidakamizwa ezithambile zingasetshenziswa. Qaphela futhi ukuthi ngaphandle kokudideka kulokho, abase Netherlands-Ukuvinjwa kokubhema okuphelele kusebenza kugwayi kuphela.
Izitimela eziqondile zixhuma i-Amsterdam ku- Paris, emadolobheni amakhulu aseBelgian afana neBrussels ne-Antwerp, nasemadolobheni aseJalimane afana Cologne, Frankfurt futhi Berlin. Imishini yamathikithi ithengisa ngokuqondile amathikithi ezindaweni eziseduze eBelgium futhi Germany, ohambweni olude uzodinga ukuthi ubonane nehhovisi lamathikithi omhlaba wonke ngasentshonalanga kwesiteshi esikhulu. Izitimela zeCityNightLine zisebenza ngqo ukusuka e-Amsterdam Central Station ukuya ikhayithi, Vienna, Copenhagen, Prague, Warsaw, Moscow, Munich, Innsbruck, kanye neZurich (ukuphoqelelwa kokubhukelwa).
I-Alkmaar - idolobha elinomlando nemakethe yalo ushizi
I-Enkhuizen - idolobhana elincane elihehayo ngeZuiderzee Museum, elikhombisa ukuthi abantu babehlala kanjani nengozi ephakeme yolwandle
I-Hoorn - idolobha elinomlando elinesikhungo sedolobha eliphakathi neminyuziyamu eminingana
IHaarlem - eduzane kakhulu lamadolobha anomlando, imizuzu nje ye-15 kusuka esikhungweni sase-Amsterdam ngesitimela
UMuiden - owayeyitheku elincane ngasemlanjeni weVecht, ubabaza iMuiderlot, isigodlo esaziwa kakhulu kuleliya lizwe, kusukela ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba ukuze axhunyaniswe nesikebhe sabavakashi abavela e-Amsterdam
INaarden - izungezwe yindandatho ephelele ye-17th-century century fortification
IHilversum - idolobhana elinothile elidume ngehholo lakhona ledolobha elihle, liphinde linikeze izinkambo zokuhamba ngamabhayisekili ngokusebenzisa amahlathi kanye ne-heath
I-Waterland kanye neZaan Region - amadolobhana amahle ohambo olufushane ukusuka edolobheni
I-Zaanse Schans - ama-windmels omlando, ama-workshops wabathengi kanye nomnyuziyamu ovulekile
I-Zandvoort - indawo eseduze yolwandle i-Amsterdam
I-Delft - eyaziwa kakhulu nge-ceramics yayo ejwayelekile eluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe
IGouda - idolobhana elinomlando elidume ngoshizi lwayo iGouda kanye nemakethe yoshizi
's-Hertogenbosch - idolobha elijwayelekile laseNingizimu Ntshonalanga, liyahlanya ngesikhathi somkhosi
I-Keukenhof - okuheha isikhashana e-Spring, lezi zinkundla zezimbali ezinkulu zithandwa kakhulu phakathi kwabahambi
I-Kinderdijk - le nethiwekhi eyiqiniso yama-windmill ikhombisa indawo evamile yase-Dutch
ILeiden - idolobha labafundi elisebenzayo nenyuvesi yakudala yezwe kanye neminyuziyamu eminingana
Rotterdam - Unomlando wokuncintisana ne-Amsterdam, kanye nomoya ohluke ngokuphelele ekwakhiweni kwesimanje
The Hague (UDen Haag) - inhliziyo yezepolitiki yezwe, iMadurodam, neScheveningen, ugu lolwandle oludumile ezweni
I-Utrecht - idolobhana elinomlando elinohlelo lwe-canal olungafisi kangako
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Amsterdam…